ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ခံတွင်းကင်ဆာကိုလက်ယက်ခေါ် နေပြီလား… – Trend.com.mm
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ခံတွင်းကင်ဆာကိုလက်ယက်ခေါ် နေပြီလား…
Posted on March 30, 2019 March 29, 2019 by Shun Lei Phyo
ကင်ဆာလို့ကြားလိုက်တာနဲ့အရမ်းကို ထိတ်လန့်နေကြတဲ့သူတွေကြီးပါပဲ။ ဒါပင်မဲ့လည်း အခုလိုတိုးတတ်ပြောင်းလဲ နေတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ ကင်ဆာလည်းကုရတာ မခက်ခဲတော့ပါဘူး။ ကုဖို့ မခက်ခဲတာမှန်ပင်မဲ့ တကယ်တမ်းကျွမ်းသွားတဲ့အ ခါမှာတော့ အသက်အန္တရာယ်ကို အရမ်းစိုးရိမ်ရတာ ကြောင့် ဒီလို ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့ ကင်ဆာ ကို မဖြစ်အောင်စတင်ကာ ကွယ်တာ အ ကောင်းဆုံးပါပဲ။ ကင်ဆာ ရောဂါပေါင်းများစွာထဲကမှ ယောကျာ်းလေးအများစု ဖြစ်လေ့ရှိကြတဲ့ ခံတွင်းကင်ဆာ ကြီးက လည်းစိုးရိမ်စရာတစ်ခုပါပဲ။
ခံတွင်းကင်ဆာဟာအထူးသဖြင့် ယောက်ျားထုကြီးမှာပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ယောကျာ်းလေးတွေအများစုက ပဲ ဒီခံတွင်းကင်ဆာကြီးကို သူတို့ဆီရောက်အောင် လက်ယက် ခေါ်ခဲ့ကြလို့ပါ။ ဆိုတော့ ဘာကြောင့် ခံ တွင်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်လဲ? လက်ယက်ခေါ်မိနေပြီးပြီဆိုရင် ဘယ်လို ပြန်ပြီးကာကွယ်ကြည့်မလဲ?…
ခံတွင်းကင်ဆာ ကို လက်ယက်ခေါ် နေတဲ့ အရာတွေက…
ခံတွင်းကင်ဆာကို အဓိကဖြစ်စေတဲ့အရာ တွေက တော့ ဆေးလိပ်နဲ့ ကွမ်းယာပါ။ အထူးသဖြင့် ယောကျာ်းလို့အများစုဖြစ်တတ်တယ်လို့ ပြောတာလည်းဒါေ ကြာင့်ပါပဲ။ ဒါဆို ဆေးလိပ် ကွမ်းယာ စားမိတာ နဲ့ဖြစ်တာလားဆို တော့လည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။ တစ်ခြားchemical များတဲ့ အစားစာ တွေအချိုရည် တွေကို အလွန်အကျွံစားမိ သောက်မိတဲ့အခါ မျိုးမှာလည်း ခံတွင်းကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကင်ဆာဆိုတာ က ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တစ်ခြားနေရာမှာဖြစ်နေရင်းက နေတစ်ခြားအစိတ်အပိုင်း ကိုလည်းကူးသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကဲ..ထားပါ …အခု ခံတွင်းကင်ဆာ လေး အ ကြောင်းဆက်လိုက်ရ အောင်…
တစ်နေ့ကို ဆေးလိပ်တစ်ဘူးအထက်သောက်တဲ့သူမျိုး၊ ကွမ်းယာကို တစ်နေ့ ၅ယာထက်စားတဲ့သူမျိုးတွေမှာ ခံတွင်းကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုအရာေ တွကို လုပ်မိနေပြီဆိုရင် ခံတွင်းကင်ဆာမဖြစ်ခင် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ကာ ကွယ်ကြမလဲ…
ဆေးလိပ်နဲ့ ကွမ်းယာကို ချက်ချင်းမဖြတ်နိုင် တောင် ပမာဏ လျော့ သောက်တဲ့နည်းနဲ့ ဖြတ်ချသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြတ်နေတဲ့ ကာ လ မှာ ရော ပြတ်ပြီးနောက်မှာပါ သ င်္ဘော ရွက် ကို ပြုတ်ပဲစားစား သုတ်ပဲစားစား၊ လက်ဖက် ဘာညာထဲပဲထည့်စားစား နေ့စဉ်စားသုံး ပေးပါ။ သ ဘောင်္ရွက်ရဲ့ အာနိသင်က ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေကို အများကြီးကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်နည်းက တော့ ရေ နွေးနဲ့ဆားနဲ့ ကိုငုံပြီး အာလုတ်ကျင်းပါ။ ဆားနဲ့ ရေနွေး မ ပူ မ နွေးလေးကို ရောပြီး ညအိပ်ယာမ၀င်ခင် ညတိုင်း အာလုတ်ကျင်းပေးခြင်းက ခံတွင်းကင်ဆာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခြားကုထုံးနည်း တွေလည်းအများကြီးရှိတာ ကြောင့် ဆရာ ၀န်နဲ့သွားရောက်တိုင်ပင်ပြီး သေချာ လေးကာကွယ်ကုသရင် စိတ်အချရဆုံးပါပဲ။
ကဲ…ကိုယ်တိုင်ခံ တွင်းကင်ဆာကို လက်ယက်ခေါ် နေမိပြီဆိုရင်တော့ ကြိုတင်ကာကွယ်ပြီး ရှောင်သင့်တာ ရှောင်ဖို့လိုပါပြီနော်…
ကငျဆာလို့ကွားလိုကျတာနဲ့အရမျးကို ထိတျလနျ့နကွေတဲ့သူတှေကွီးပါပဲ။ ဒါပငျမဲ့လညျး အခုလိုတိုးတတျပွောငျးလဲ နတေဲ့ ခတျေကွီးထဲမှာ ကငျဆာလညျးကုရတာ မခကျခဲတော့ပါဘူး။ ကုဖို့ မခကျခဲတာမှနျပငျမဲ့ တကယျတမျးကြှမျးသှားတဲ့အ ခါမှာတော့ အသကျအန်တရာယျကို အရမျးစိုးရိမျရတာ ကွောငျ့ ဒီလို ကွောကျစရာ ကောငျးတဲ့ ကငျဆာ ကို မဖွဈအောငျစတငျကာ ကှယျတာ အ ကောငျးဆုံးပါပဲ။ ကငျဆာ ရောဂါပေါငျးမြားစှာထဲကမှ ယောကျြားလေးအမြားစု ဖွဈလရှေိ့ကွတဲ့ ခံတှငျးကငျဆာ ကွီးက လညျးစိုးရိမျစရာတဈခုပါပဲ။ခံတှငျးကငျဆာဟာအထူးသဖွငျ့ ယောကျြားထုကွီးမှာပိုဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုရငျ ယောကျြားလေးတှေအမြားစုက ပဲ ဒီခံတှငျးကငျဆာကွီးကို သူတို့ဆီရောကျအောငျ လကျယကျ ချေါခဲ့ကွလို့ပါ။ ဆိုတော့ ဘာကွောငျ့ ခံ တှငျးကငျဆာဖွဈနိုငျလဲ? လကျယကျချေါမိနပွေီးပွီဆိုရငျ ဘယျလို ပွနျပွီးကာကှယျကွညျ့မလဲ?…ခံတှငျးကငျဆာ ကို လကျယကျချေါ နတေဲ့ အရာတှေက…ခံတှငျးကငျဆာကို အဓိကဖွဈစတေဲ့အရာ တှေက တော့ ဆေးလိပျနဲ့ ကှမျးယာပါ။ အထူးသဖွငျ့ ယောကြာျးလို့အမြားစုဖွဈတတျတယျလို့ ပွောတာလညျးဒါေ ကွာငျ့ပါပဲ။ ဒါဆို ဆေးလိပျ ကှမျးယာ စားမိတာ နဲ့ဖွဈတာလားဆို တော့လညျး မဟုတျပွနျဘူး။ တဈခွားchemical မြားတဲ့ အစားစာ တှေအခြိုရညျ တှေကို အလှနျအကြှံစားမိ သောကျမိတဲ့အခါ မြိုးမှာလညျး ခံတှငျးကငျဆာ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ကငျဆာဆိုတာ က ခန်ဓာကိုယျရဲ့ တဈခွားနရောမှာဖွဈနရေငျးက နတေဈခွားအစိတျအပိုငျး ကိုလညျးကူးသှားတာမြိုးဖွဈတတျပါတယျ။ ကဲ..ထားပါ …အခု ခံတှငျးကငျဆာ လေး အ ကွောငျးဆကျလိုကျရ အောငျ…တဈနကေို့ ဆေးလိပျတဈဘူးအထကျသောကျတဲ့သူမြိုး၊ ကှမျးယာကို တဈနေ့ ၅ယာထကျစားတဲ့သူမြိုးတှမှော ခံတှငျးကငျဆာ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒီလိုအရာေ တှကို လုပျမိနပွေီဆိုရငျ ခံတှငျးကငျဆာမဖွဈခငျ ဘယျလိုနညျးနဲ့ ကာ ကှယျကွမလဲ…ဆေးလိပျနဲ့ ကှမျးယာကို ခကျြခငျြးမဖွတျနိုငျ တောငျ ပမာဏ လြော့ သောကျတဲ့နညျးနဲ့ ဖွတျခသြငျ့ပါတယျ။ ဒီလိုဖွတျနတေဲ့ ကာ လ မှာ ရော ပွတျပွီးနောကျမှာပါ သ င်ျဘော ရှကျ ကို ပွုတျပဲစားစား သုတျပဲစားစား၊ လကျဖကျ ဘာညာထဲပဲထညျ့စားစား နစေ့ဉျစားသုံး ပေးပါ။ သ ဘောင်ျရှကျရဲ့ အာနိသငျက ကငျဆာ ဖွဈနိုငျခွကေို အမြားကွီးကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။နောကျတဈနညျးက တော့ ရေ နှေးနဲ့ဆားနဲ့ ကိုငုံပွီး အာလုတျကငျြးပါ။ ဆားနဲ့ ရနှေး မ ပူ မ နှေးလေးကို ရောပွီး ညအိပျယာမဝငျခငျ ညတိုငျး အာလုတျကငျြးပေးခွငျးက ခံတှငျးကငျဆာကို ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။တဈခွားကုထုံးနညျး တှေလညျးအမြားကွီးရှိတာ ကွောငျ့ ဆရာ ဝနျနဲ့သှားရောကျတိုငျပငျပွီး သခြော လေးကာကှယျကုသရငျ စိတျအခရြဆုံးပါပဲ။ကဲ…ကိုယျတိုငျခံ တှငျးကငျဆာကို လကျယကျချေါ နမေိပွီဆိုရငျတော့ ကွိုတငျကာကှယျပွီး ရှောငျသငျ့တာ ရှောငျဖို့လိုပါပွီနျော…
ချစ်သူကို စိတ်မချဖြစ်နေရင်း သူ့ကိုအဝေးတွန်းထုတ်သလို မဖြစ်ပါစေနဲ့ ..